Waa Ka Mamuunc Ragga : Gabaryaheey Dhib Ma Ku Qabtaa Qilaafaadka Joogtadada Ee Gacaliyahaaga , Arimahaan Sameey . – Puntlandtimes
Waa Ka Mamuunc Ragga : Gabaryaheey Dhib Ma Ku Qabtaa Qilaafaadka Joogtadada Ee Gacaliyahaaga , Arimahaan Sameey .
December 27, 2017 W LAASCAANO
Waa wax iska caadi ah in qilaafaad u dhex maro lamanaayaasha Somaliyed waana suura gal in adiga qaldan tahay ama xaajiga qaldan yahay balse waxa ay Puntlandtimes.com ku siineysaa talooyin muhiim ah oo aad sameyneyso marka xoogaa qilaaf uu idin dhex maro .
Si aad uga yeesho mid qaata qaladkiisa , gartana aad adiga u yeelato raac talooyinkaan gaaban .
* Haddii gacaliyaahaga uu qaldamo haku qaylin hana xanaaqin waliba fal celis ha sameyn balse u dhaaf kaligiis ha buuqee adiga afka qabso kana baxa doodda.
* Is Daji , kaliya ka fikir waxii dhacay , haddii aad hubto in aadan ka qaldamin , adeegso maskax wacan oo keeneysa in odayga uu garto qaladkiisa.
* Waajibaadkii ku saarnaa gudo ee guriga , caruurta iyo daryeelkiisa , ha siin fursad uu dhibka uu ku soo buun-buuniyo .
* Marka ay doodda dhacdo ka dib , haddii ay dhacdo in aad wada cunteeysaan hadalkaada ha yaraado ayay Puntlandtimes.comku leedahay gabaryaheey illaa wax daruuri mooyee hana noqon qofka sheekada fura .
* Wacnaanta muuqalkaada ilaalso hana ku soo muuqan niyad jab ama murugo balse taasi badalkeeda noqo mid waji furan oo bulsho ah waa marka ehelkiisa ama kaada wada joogtaan balse go`aankaada ha noqdo midkii aan ku siinay balse dadka kale yeesan ku fahmin adiga ayaana arki doona in uu is badallo kana qoomameeyo waxii dhacay .
*Kaga mashquul howsha guriga iyo haddii caruur ay jiraan ama shaqadada , ha dareemo odayga in aad haysato wax noloshaada mashquuliya oo badel kaaga noqda dhibkiisa.
Ugu dambeyn waxa ay Puntlandtimes.com ku leedahay isaga ayaa sheekada kula furaya waliba mar marsiyo u raadinaya waxii dhacay balse adiga si degan u qaabil arintaas oo dhib kale ha kicin sida in aad eedeyso , marka uu ku raali giliyana xabad gili kuna dheh dhibka iska da aniga waan ku jeclahay nolosheyda waa adiga , waad arkeysaa isaga oo garka ku qabsanaya labada daanna kaa dhukanakanaya
Fadlan Haddii Ay Warbixintaan Ku Cajibisay La Sii Wadaag Asxaabtaada